Blockchain News 25 EyoMqungu 2018 - Blockchain News
urhulumente Indonesian ukufunda luncedo Bitcoin njengomntu mali
Urhulumente Indonesian Uyayiqwalasela Bitcoin isenzi njengesixhobo mali, Futures Exchange nelawula kwiBhodi Ministry Trade kaThixo (Bappebti) uthe.
"Esebenzisa Bitcoin njenge isixhobo sentlawulo akuvumelekanga, kodwa njani ngokusebenzisa ngayo njengesixhobo mali? Ingaba oku ukuba okanye hayi?"Bappebti intloko Bachrul Chairi ngoLwesibili e Jakarta, njengoko kubika kompas.com.
Indonesian uMthetho No. 7/2011 kwi lwemali ithi i eshiyiweyo ऑनलाइन kuphela esemthethweni intengiselwano kunye nentlawulo isixhobo kweli lizwe.
Bachrul Wathi Bappebti ukufunda kukusetyenziswa Bitcoin njengesixhobo mali. "Kuyo isifundo, sifuna ukubona ukuba Bitcoin enokubonwa njengempahla yedijithali," uthe.
kweliso Market kunye bureau nophuhliso intloko Dharmayugo kumculo kwi Bappebti uthe intlangano babona ukuba ndinokuba enkulu yorhwebo imveliso Bitcoin.
iyodwa, UMphathiswa wezeMali Sri Mulyani Indrawati wathi akukho mmiselo kweli lizwe akuvumelekanga abemi balo ukuba utyalomali cryptocurrency. "Kuxhomekeke abantu ukuba basebenzise Bitcoin njengesixhobo mali,"Ubalule.
Okokuqala Bitcoin eJozi deal ukwathutha ingqolowa eRussia kuya Turkey
Cryptocurrencies benza uyangena ukudla yorhwebo.
EJozi deal yokuqala kuhlala Bitcoin wabulawa ngenyanga yokugqibela isitya ethwele ingqolowa owakungqina- phezulu eRashiya ku Turkey, ngokutsho Prime Shipping Foundation, elona linge emva intengiselwano.
Umthwalo waba yinxalenye pilot novavanyo lwenkqubo yentlawulo blockchain Prime Shipping Foundation ukuze zorhwebo isambuku, Wathi IGosa eliyiNtloko lesiGqeba Ivan Vikulov.
Ithekhnoloji yedijithali ileja-based ziya kwenza processing nangoko iintlawulo kunye ukuguquka ibe nangaphandle cryptocurrencies, ngokutsho inkampani, ubambiswano phakathi Gibraltar-based Inani Capital Ltd. wodwa broker Interchart LLC. Eli qela kwakhona uceba ukwenza imali yayo digital.
CEO of yebhanki inkulu eRashiya: Cryptocurrencies akufuneki ivalwe
Abanempembelelo bhanki Russian Herman Gref, intloko Sberbank, iye yaqinisekisa isikhundla sakhe ophikisa kukuvalwa cryptocurrencies.
abasemagunyeni Russian kunye namagosa zemali kufuneka Unyamezele cryptocurrencies kunye nobuchwepheshe blockchain, yeendaba Russian TASS ucaphula CEO Sberbank Herman Gref esithi. Le bhanki yaqhuba inyathelo, egxininisa ukuba cryptocurrencies ezisaza luqondwe kwaye nawuphi na ummiselo kufanele kuhlaziywe yaye kuqwalaselwa, akukho mva.
Gref uthe “it [crypotocurrencies] akufanele ukuba ivalwe, njengoko iteknoloji entsha enkulu kuphuhliso, akukho namnye kodwa ukuqonda.”
Phakathi ku-2016, phakathi inkonzo zezimali Russian ngayo (akuphumelelanga) ukuzama elingangenisa iBhili bitcoin ban ukuba izaphuli bitcoin Abokuqala, Gref ekuhleni wathetha ephethe imali encinci bitcoin kunye ekuchaseni oyilwayo. Ngelo xesha, inkonzo zezimali eRashiya ecetywayo isigwebo entolongweni ukuya ku 7 iminyaka for Abokuqala bitcoin.
Brisbane Airport ukwamkela Bitcoin
Brisbane Airport iye ezinophawu ngokwalo njengoko lwemali yedijithali moya yehlabathi yokuqala friendly.
Lo moya Aussie uzimanye kunye nenani abathengisi kunye TravelbyBit. Kungekudala Abahambi uza kuba nako ukusebenzisa inkqubo yentlawulo cryptocurrency TravelbyBit kaThixo, ebandakanya Bitcoin kunye nezinye iimali digital, ukuba idle kwaye ndithenga ezininzi kwiivenkile ezahlukileyo kuzo zombini iitheminali.
Ubambiswano komeleza Injongo Brisbane moya kaThixo ukuxhasa amashishini asekuhlaleni, ukuphucula amava umkhweli, uze ube yinkokeli kwi-moya space wedijithali ezintsha.
Kuthutho moya ukuya yokuhlala Ihotela ephezulu, kunye neendawo ukutya kunye nolonwabo wayengangcikivwa Valley Brisbane kaThixo, Brisbane iye rebranded yi bendawo 'Crypto Valley' kunye ngaphezu 20 abarhwebi kule ndawo ngoku ukuthatha iintlawulo kwemali digital.
uKalebhi Yeoh, CEO of TravelbyBit, wathi, "Xa sukuba owuhambayo phesheya kufuneka ukujamelana ngeemali ezininzi kwaye awusoze uyazi iibhanki babiza oko amazinga zokunaniselana. Apha TravelbyBit siya ukukhuthaza Bitcoin intshukumo zokuhamba. currency Digital lokuhamba kwihlabathi-ngokubanzi. Yinto elula, likhuselekile kwaye akukho ntlawulo yebhanki,"Mr Yeoh wathi.
Stock yorhwebo app Robinhood ukuze uqalise Bitcoin & urhwebo Ethereum
Abathengi e California, Massachusetts, Missouri, Montana and New Hampshire uya kukwazi ukurhweba bitcoin kunye ethereum ngokusebenzisa usetyenziso eqala ngoFebruwari, Robinhood wamemezela ngoLwesine. Ngeli xesha, ngoku bonke abathengi bakwazi ukulandelela amaxabiso kwaye ufumane izaziso 16 cryptocurrencies on the app.
Robinhood iqalisiwe malunga neminyaka emithandathu eyadlulayo njengendlela kubathengi, zimali kakhulu abancinane, lokuthengisa babelawula ngenxa Smartphones zabo simahla. Kwakhona Robinhood ibe iintlawulo ngeziqinisekiso ezifunyenwe inkonzo, yaye ngoDisemba yasungula iinketho zorhwebo. Ngoku Le nkampani iye ngaphezu 3 abasebenzisi million, nge 78 ekhulwini oluwe ekuthiwa-lobudala wemileniyam of 18 ukuba 35 iminyaka ubudala.
Ukuze urhwebo cryptocurrency, Robinhood iya kuba akukho minimums investment okanye ngobukhulu, kwaye kungekho mida yokuyeka. Ukuqhambuka-up liya kubamba inkoliso iinkozo digital offline koko kuthiwa ebandayo yogcino. Lo mkhuba kuthintela imigewu ukubiwa zemali.
Mark Zuckerberg uku ...
Ngaphandle izithembiso ...
Post Previous:Umvumbo umqhubi Intlawulo uyala Bitcoin
Post Next:An kuhlaselwa Abaxhobileyo komthetho Canadian Crypto Exchange